DAWLADDA SACUUDIGA OO SHURUUDO KU XIDHAY XUJAAJTA REER QADAR | Saxil News Network
DAWLADDA SACUUDIGA OO SHURUUDO KU XIDHAY XUJAAJTA REER QADAR
Weli waxa aan xal laga gaadhin xiisada siyaasadeed u dhaxaysa wadamada khaliijka oo uu badhkood hogaaminayo sacuudi arabiya iyo qadar.
Xiisadan oo gaadhay in ay safaaradaha kala qaataan isla markaana ay isu cadaystaan colaad, sidoo kale waxa todobaadyadii ugu horeeyay xiisadaasi soo baxay in dawladda sacuudigu ay hor joogsatay dadka reer qadar ee damacsan in ay soo gutaan waajibaadka xajka.
Hadaba wasiirka wasaaradda xajka iyo cumradda u qabailsan dalka sacuudi areebiya ayaa shaaciyay markii ugu horeysay in ay dadka reer qadar iman karaan dalka sacuudiga si ay u gutaan waajibaadka xajka iyo cimrada.
Waxa uu xusay wasiirku in hay’adda u qaabilsan sacuudiga la dagaalanka argagaxisadu ay baadhitaan ku samayn doonto dadka reer qadar, madaama lagu eedeeyay dalkaasi in ay taageeraan kooxaha Argagaxisada ah.
Sidoo kale waxa shuruud looga dhigay dadka dalka qadar uga imanaya gudashada waajibaadka xajku in ay soo raaci karaan diyaaradaha ay doonaan, marka laga reebo diyaaradda Qadar Airweys oo laga mamnuucay in ay soo gasho hawadda wadamada xulafada ah ee uu hogaaminayo sacuudi Areebiya.
Sidoo kale dadkan ayaa loo ogol yahay in ay ka soo degaan labada garoon ee kala ah King Abdul Aziz International Airport oo Jeddah ku yaala iyo Mohammed bin Abdul Aziz Airport oo magaaladda Madinah ku yaala.